२०२ स्थानको परिणाम आयो, कसले कति जिते ? निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई शपथसँगै प्रशिक्षण | NepaleKhabar.com
२०२ स्थानको परिणाम आयो, कसले कति जिते ? निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई शपथसँगै प्रशिक्षण
May 18, 2017 | 9:41 pm
काठमाडौ, जेठ ४– प्रदेश नम्बर ३, ४ र ६ का २८३ स्थानमा पहिलो चरणमा भएको स्थानीय निर्वाचनको २ सय २ स्थानीय तहको मत परिणाम आइसकेको छ । बाँकी ८१ स्थानीय निकायको मत परिणाम आउने क्रममा छ ।
बिहीबार साँढे ५ बजेसम्मको नतिजामा सवैभन्दा अगाडी नेकपा एमालेले आफ्नो अग्रता कायमै छ । उसले ८० स्थानको प्रमुख पद कव्जा गरेको छ ।
त्यस्तै प्राप्त परिणाम अनुसार ७७ स्थानमा जित्दै नेपाली कांग्रेसले दोस्रो स्थान यथावत राखेको छ । तेस्रो शक्ति बनेको माओवादी केन्द्र अहिलेको यो निर्वाचन परिणाममा पनि तेस्रो स्थानमै छ । उसले अहिलेसम्म ३९ स्थानीय निकायको प्रमुख पद हात पारेको छ ।
योसँगै ३ स्थानमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुले जितेका छन् भने एकएकमा राप्रपा, नयाँशक्ति र जनमोर्चाले जितेका छन् ।
सरकारले स्थानीय तहका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई शपथ ग्रहणसँगै स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी प्रशिक्षण दिने तयारी गरेको छ ।